महाधिवेशन सार्ने आवाज पनि उठेको छ– अध्यक्ष श्रेष्ठ
महाधिवेशन सार्ने कुरा महासंघको विधान र हित विपरीत छ– अरु पदाधिकारी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । तत्कालीन अध्यक्ष गौचनको हत्यापछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अत्यन्त ‘क्रुसियल’ चरणबाट गुज्रियो । आफ्नो ज्यानको सुरक्षा समेत अत्यन्त संवेदनशील बनेको त्रासकै अवस्थामा एफक्यान पदाधिकारीहरुले एउटा अघोषित युद्ध लडे निर्माण क्षेत्रभित्र हुर्किएको ‘गुण्डाराज’ सित ।
यद्यपि ‘पावर र पहुँच’लाई दुरुपयोग गर्ने एउटा पंक्तिले सुरुदेखि नै जोडबल गरे अभियुक्त सकेसम्म नपक्राउन । तर, परिस्थितिले पक्राउ परेका अभियुक्तहरुलाई लिएर यतिबेला अदालती बयान चलिरहेको छ । अनुसन्धान क्रमम प्रहरी निकाय भित्र पनि ‘कस्तो किसिमको कारबाही गर्ने’ भन्ने विषयले गहिरो विवाद सिर्जना भयो ।
विवादमा सरकारसँग जोडिएका उच्च तहका व्यक्ति समेत जोडिएर आए । जसको मक्सद थियो अभियुक्तलाई कम सजाएँ दिलाउने वा छुटाउने । तर, गौचन हत्यापछि एकै ठाउँ देखिएका एफक्यान पूर्व पदाधिकारीदेखि संघर्ष समिति समेतले यो अवस्थामा नाकमुख देखाएका छैनन् ।
निर्माण क्षेत्रको ‘पहिलो सहिद’ घोषणा गराएपछि सबै उद्देश्य पूरा भएको ठानेको सन्देश दिएको उक्त संघर्ष समितिको निस्क्रियतालाई लिएर यतिबेला महाधिवेशनको मुखमा पुग्न लागेको महासंघ सम्बद्ध जिल्ला तथा प्रदेशका व्यवसायी बीच फरक खाले बहस बाहिर आएको छ ।
‘महासंघको नाम भजाएर अवसर लिने न्यायको बेला मुख नदेखाउने’ भन्दै उनीहरुको आवाज चर्काे बन्दै गइरहेको छ ।
यता, फागुन अन्तिमसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको महासंघ पदाधिकारी भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन ‘गर्ने कि पर सार्ने’को द्वन्द्वमा देखिन्छन् । विधान प्रकाशन सहित आफूलाई संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्न सफल भएको महासंघका केही जिल्लाका आन्तरिक काम सम्पन्न गर्न बाहेक अब महाधिवेशनमा जाने मनोविज्ञान तयार हुँदै गएको पनि छ ।
यिनै विषयबारे जान्न खोज्दा अध्यक्ष विष्णु भाइ श्रेष्ठले ‘महाधिवेशन सार्ने आवाज पनि देशैभरबाट आइरहेको’ बताएका छन् । तर अन्य पदधिकारीहरु भने महाधिवेशन सार्ने कुरा विधान विपरीत रहेको बताउँछन् । महासंघको आगामी जीवन अब कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासो बढिरहेकै बेला निर्माण व्यवसायी महासंघले कस्तो सन्देश दिन चाहेको छ, अध्यक्ष श्रेष्ठसँग निर्माण सञ्चारले गरेको छलफलको सारसंक्षेपः
अध्यक्षज्यू, महासंघ के गर्दै छ यतिबेला ?
यहाँहरुलाई थाहै छ, हाम्रो तत्कालीन श्रद्धेय अध्यक्षज्यूमाथि भएको निन्दनीय घटना पछि हामीलाई आन्तरिक जीवन सम्हालिएर उठ्नै समय लाग्यो । संघर्ष सँगै निर्माण क्षेत्रको गुण्डाराज विरुद्ध हामी लड्दै आयौं ।
हामीले हामीमाथि अन्याय भयो भन्दै सरकारदेखि सुरक्षा निकाय सबैको ढोका ढक्ढक्यायौं । अभियुक्तहरु पक्राउ पनि परे । कम्तीमा एक चरणसम्म राज्यले न्याय गरेजस्तै हामीलाई पनि लाग्यो ।
तर, यतिबेला सुनिदै छ, न्यायका मूर्तिहरु, न्याय दिलाउने प्रहरी प्रशान बीचमा पनि केही गडबडी भएको छ अरे ! यदि यस्तो हो भने नेपालमा निर्माण व्यवसायी त मरिरहे हुने भो नि हैन ? न्याय भन्ने पनि नहुने भो ।
तर मलाई लाग्छ, त्यस्तो पाशविक घटना पछि व्यवसायीको जिउ धनको समेत सुरक्षा दिएको न्यायिक निकायले, नेपाल प्रहरीले न्याय र अन्याय के हो भन्ने हेर्छ जस्तो लाग्छ । न्याय गर्नु होला कि भन्ने विश्वासै छ !
तर महासंघको एकढिक्का प्रयास भएजस्तो देखिएन नि ?
प्रहरीभित्र समेत विवाद हाल्न र आफू उम्कनेबारे अभियुक्त पक्षधर निकै अघि बढेको देखियो त ? यही त बुझिनसक्नु छ नि ! यस्तो फौजदारी मुद्दा आफैंमा सरकारवादी मुद्दा हो । हामीहरुले के भइरहेको छ भनेर बुझ्नबाट पनि पन्छिएका छैनौं ।
आजै बिहान (२ दिन अघि) मात्र हामीले सरकारी वकिलज्यूलाई भेटेर हामीले आफ्ना कुरा राखेका छौं । उहाँहरुले आफूहरुलाई फोनबाट छुटाउने पक्षधरको फोन आएको त भन्नु भएको थियो ।
तर, पावर र पैसाकै भरमा न्याय मार्न देलान् त सरकारवादी मुद्दामा सरकारी पक्षले नै ? हाम्रा साथीहरु पनि सबै आ–आफ्नै काममा भएर होला एक ढिक्का प्रयास भएको जस्तो नदेखिएको ।
यदि यस्तै हो भने, सरकारले निर्माण व्यवसायीको जिउ धनको सुरक्षा र गोली हानी गरेको हत्या केसमा समेत न्याय दिलाउन सकेन भने त हामीलाई आन्दोलन बाहेक के बाँकी रहन्छ र ?
हामीलाई न्याय चाहियो, हाम्रा निर्माण व्यवसायीको जीउधनको रक्षा हुनु पर्यो । हाम्रो महासंघ ढुक्क भएर अघि बढ्नसक्ने हुनु पर्यो ।
देश विकासको जुन काम जिम्मा लिएको छ, ढुक्क भएर काम गर्न जान सक्ने वातावरण हुनु पर्यो । यदि हाम्रो आवाज सुनिदैन भने, अब हामी फेरि एक पटक दबाब दिने गरी अघि बढ्ने योजना बनाउँछौं ।
म अब हुने महासंघको वैठकमा यो एजेन्डा नै लिएर जान्छु ।
अलि फरक प्रसंगमा जाऔं, तपाईले कार्यभार लिदै गर्दा फागुनको अन्तिमसम्म महाधिवेशन पनि गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो, के अब महासंघलाई महाधिवेशन लागेको हो ?
तपाईले भनेजस्तै मैले अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा महासंघको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षज्यू सहित महासंघ माथि भएको जघन्य हमला पछि आजसम्म पनि महासंघको आन्तरिक जीवन नै सम्हाल्दै हामी ठिक्क छौं ।
महाधिवेशनमा जाने निर्णय पनि भएकै हो । तर, देशैभरबाट यतिबेला महाधिवेशन नगर्न भन्दै आवाज पनि उठिरहेको छ ।
हाम्रो निर्माण व्यवसायी साथीहरुले यो बेला त हामी काम काममा हुन्छौं, महासंघले चाहिँ महाधिवेशन गराउन यति नै बेला के हतारो गरेको भन्ने पनि आएको छ ।
विधानले त समयमै महाधिवेशनको कुरा गर्छ नि हैन र ?
विधान अनुसार नै महाधिवेशन गर्ने भन्ने महासंघको कुरा हो । समय अझै बाँकी छ । हामी वैठकमा छलफल गर्ने सोचमा पनि छौं ।
खाली मैले भनेको मात्रै के हो भने हाम्रा साथीहरुले लामो समयसम्म काम गर्न पाएनन् । टेन्डर पनि लामो समय रोकिएको थियो ।
पेमेन्ट पनि रोकिएको अवस्था छ । त्यसैले पनि साथीहरुले यतिबेला नभनेर साउन भदौतिर महाधिवेशन गरौं भनेका होलान् । तर यसबारे अन्तिम कुरा महासंघको वैठकले नै टुंग्याउने हो ।
अर्काे कुरा, विधान अनुसार महासंघलाई पनि हामीले संघीय प्रादेशिक ढाँचामा लगेका छौं । तर अझै पनि स्थानीय जिल्ला र प्रदेशका सबै संरचनाहरु परिपक्व बनिसकेको अवस्था छैन ।
यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर उपयुक्त समयमा महाधिवेशन गर्ने कुरा गर्ने हो । महासंघको नेतृत्व चयन र अद्यावधिक गर्न पनि महाधिवेशन चाहिन्छ । महाधिवेशन नगर्ने भन्ने त कुरै आउँदैन नि !
यदि अन्यथा लिनुहुन्न भने, आउँदो चुनावमा विष्णुभाइ श्रेष्ठको पनि त दाबी होला ? शुभचिन्तकहरुलाई जानकारी दिनु राम्रै होला कि !
तपाईहरु, शुभचिन्तकहरुले यसबारे जिज्ञासा राख्नु गलत पनि होइन । स्वाभाविकै रुपमा महासंघको भावी नेतृत्वका हकमा विष्णु भाइ श्रेष्ठको पोजिसन के हुने, कस्तो हुने भन्ने सबैलाई थाहै छ ।
भावी नेतृत्व क्रममै आफू रहेको हुनाले पनि मैले यसबारे बोलिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । जुन अवस्थामा मैले महासंघ सम्हालेको छु, महासंघलाई नै बलियो बनाउने मेरो धेय हो ।
विष्णु भाइ वास्तवमा केही होइन । महासंघ र निर्माण व्यवसायीहरुको जिउ धनको सुरक्षाबाहेक मैले यतिबेला केही सोचेको पनि छैन । त्यसैले मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको महासंघको आन्तरिक जीवन र बाहिरी सुरक्षा पनि हो ।
म विगतमा पनि एकदम कडा स्वभावको बनेर देखिन । म भन्दा योग्य, म भन्दा अब्बल साथीहरु जो आएपनि महासंघ बनाउने भन्ने सर्तमा म लचक हुन पनि सक्छु । तर, हचुवा र हल्का भरमा मैले पनि निर्णय लिन्न नि !